Ma jiraa hab wax ku ool ah oo loo maro shabakadayda PageRank?
Waxaa jira dhowr istiraatiijiyado hadda jira oo loo isticmaali karo inay sare u qaadaan bogga intarnetka ama blogka ee bogagga dambe. Ka hor intaanaan billaabin, aynu wajahno - ma macno noqon kartid "boodhka" PageRank ee aad hadda haysatid, dhab ahaanba ha ahaato dhibaato ama si fiican loo hagaajiyay. Dabcan, faahfaahinta gadaashaada ayaa ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee muhimadda muhiimka ah marka ay timaaddo saameyn la qiyaasi karo oo ugu dambeeya go'aamisa boggaga bogga boggiisa. arrimaha kale loo arkaa by matoorada search waaweyn sida Google ka mid ah, waa kuwa soo socda: Naftooda, keywords ugu weyn ee diirada u saaran, content tayo gaar ah, iyo inta kale ee guryaha website kuwaas oo ka yar muhim in SEO permalinks. Ku soo noqoshada dhibicda - waa wax aan macquul aheyn in isla markiiba la hagaajiyo PageRank Your backyard. Laakiin hawshu wali waa la gaari karaa, iyada oo la tixgelinayo inaad diyaar u tahay oo diyaar u tahay inaad la shaqayso dulqaadka guud ee istiraatiijiga muddada dheer. Hoos waxaa ka mid ah hababka ugu macquulsan ee lagu xiro dhismaha kuwaas oo suurtagal ah in ay gacan ka geystaan ​​boggaaga sare ee sare ee Google.
Oo aan kuu sheego ereyga ugu dambeeya ee digniinta - marna ha isku dayin inaad kobciso PageRank oo leh farsamo dhab ah. Sidaa daraadeed, halkan waa waxa ugu horeysa ee loo tixgeliyo ugu horreyn:
Focus on more Quality, halkii Tirada
Fikradda muhimka ah ee sameynta qaybaha libaaxyada ee xeeladaha farsamada SEO waxay ku qeexayaan tayada kaliya. Si fudud u dhig, bartilmaameedka caalamiga ah ee SEO waa in la gaaro natiijo xasilloon oo muddo dheer socota ee dallacsi online ah ee SERPs. Nasiib darro, bloggers aad u tiro badan iyo kuwa websaydhka ah ayaa soo foodsaartay dhibaatada caadiga ah ee dhismaha xiriirka. Waxaan u jeedaa marar badan waxay siiyaan mudnaanta tirada, rajada rajo-gelinta ah ee ka dhigaysa boodh weyn oo gadaal ah oo dibedda ka dhigi doona qiimeyntooda guud. Laakiin waa qalad aad u xun sababtoo ah xidhiidhada tayada hoose ee aan tayada lahayn ama aan khuseynin maaha oo kaliya waxtar ujeedo SEO ah. Dhab ahaantii, waxaa jira fursado badan oo aad ku kasban kartid rigoor heer sare ah halkii aad horumarin lahayd. Xaaladda ugu xumayd, wax walbana waa la joojin karaa mamnuucid joogto ah.
Isku xirnaanta Niche ama Warshadaha Ganacsiga
Marna ha ka dhigo qaladkan xun, sidaan sanado badan u dhaafay. Xaqiiqdii, waxaan u isticmaali lahaa habka khalad ah ee dib u soo celinta boggeyga - kaliya oo isku xiraya bog kasta oo la isku halleyn karo oo aan helay qiimo la. Sidaa darted, badankooda dib u qaabeyntii cusub ee la abuuray waxay ku fashilmeen inay si macquul ah wax u qabtaan - iyaga oo aan dhammaantood lagu abuuray dhinaca midigta saxda ah. Natiijo ahaan, waxaan lumiyay wakhti iyo wakhti badan oo aan ku dhufan lahayn - kaliya inaan ka careysiiyo inaanan wax faa'iido ah ka helin PageRank ka soo laabashada dhabarka. Taasi waa sababta ka hor inta aysan ku lug laheyn faallooyinka iyo mawduucyada mawduucyada, waxaan si adag ugu talineynaa in la helo jeegar labalaba ah in ilaha ugu muhiimsani ay si buuxda u hirgeliyaan nuucaaga ama joogitaanka ganacsi isku mid ah.
Kala Hadlida Cilmi-baarista Kelmadaha La Siiyo Haysashada
Waa hagaag, looma baahna in la sheego in content uu yahay boqorka. Dhamaan waxyaalaha ku saabsan SEO waxaa macno ahaan loo rogaa heybtiga saxda ah ee ereyada muhiimka ah iyo falanqaynta habboon ee xisaabta. Sidaa daraadeed dhabarka dhabta ah ee ku yaal boggaga internetka, ama qoraalka qoraalka ah si aad u qeexan. Nasiib darro, hab isku mid ah oo loola tacaali karo cilmi-baaris qoto-dheer oo macquul ah ayaa badanaa la dayacay. Taasi waa sababta aad u tixgelinayso qorista xirayaashaada si taxadar leh - ugu yaraan adigoo isticmaalaya AdWords ama qalabka cilmi baarista ee kale. Habkaa, waxaad u xaqiijin doontaa inaad ka hortagtid isku xirnaanta khalad sababtoo ah la'aanta caan u ah raadinta. Kaliya iska hubi in aad tahay mid aad u kacsan oo aad raacdid dhammaan isbeddellada waaweyn ee raadinta iyo isbarbardhigyada muhiimka ah. Xusuusnow, qoraallo laba qalab oo isku midka ah oo isku mid ah ayaa ku siin kara isku-xirnaan ay ku imaan karaan awoodda gaadiidka oo aan si siman lahayn, oo markaa si joogto ah u saameynaya PageRank siyaabo gaar ah Source .